Advertisers - myOpenware
Why you would use myOpenAds...
သင့်လုပ်ငန်းကို ခေတ်နှင့်အမှီ အင်တာနက်ပေါ်မှာရောက်စေပြီး အခြားလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ အောင်မြင်မှုရယူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလား?
ဒါဆိုရင်တော့ ဒီအတွက်တော့ စိတ်မပူပါနှင့်။ သင့်အလုပ်ငန်းရဲ့ marketing campaign တွေကို ပိုမိုထိရောက်နိုင်ဖို့ online ကနေ အထောက်အကူပြုမယ့် online marketing campaign တွေကို ကျွန်တော်တို့က ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်မှုတွေ ပေးနေပါတယ်။ myOpenAds နှင့် ပူးပွဲလုပ်ဆောင်တဲ့ website တွေရဲ့ web page ပေါ်တွင် ကြော်ငြာတွေကို ပြသပေးရာမှာ တစ်လလျှင် အကြိမ်ရေ သန်း ၁၀၀ (သို့) အကြိမ်ပေါင်း သိန်း ၁,၀၀၀ ထက်မနည်း ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သိသလောက် ဒါဟာ မြန်မာပြည်မှာ online network တစ်ခုနေနှင့် အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်က အင်တာနက် သုံးစွဲသူ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများကို ထိထိရောက်ရောက် ကြော်ငြာနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ (၀၁)၃၇၃၁၄၉ နှင့် (၀၁)၁၂၂၀၇၅၉ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လစဉ် ကြော်ငြာပြသည့်အရေအတွက်ပေါင်းမှာ သိန်း ၁,၀၀၀ အထက်
လစဉ် သုံးသည့် လူအရေအတွက်မှာ ၁၀ သိန်း အထက်
မြန်မာပြည်တွင် နာမည်ကြီးသည့် website အတော်များများတွင် ကြော်ငြာနိုင်ခြင်း
So you have decided to venture into online, establish an online presense and looking to grow you business? You might have found your best partner to execute your online marketing campaign. We are the LARGEST online advertising network in Myanmar with more than 100 millions impressions, and 1 million individuals.
Why you would let us manage your advertising campaign?
Reaching the broadest clients with lower costs is not easy. Especially if you are trying to enter intoanew market like Myanmar. myOpenware specializes in Burmese/Myanmar market. We know inside-out of the burmese online sites. We can help promote your products, services or sites in Myanmar.
more than 100 millions impressions per month
more than 1 millions unique visitors per month
top websites in Myanmar work with us
and the number is still growing!
No 11, Level 7, Sanchaung St, Sanchaung Tsp, Yangon
Copyright 2015 - myOpenware / Big IMPACT Media Co., Ltd